Caalamka oo ku heshiiyey in la badiyo dib u dejinta qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ra´iisal wasaare Stefan Löfven, wasiirada arrimaha Dibada iyo Isabela Lövin wasiirada cimilada, kaalmada caalamiga iyo ku simaha madaxa dawladda. Foto: Pontus Lundahl/TT
Caalamka oo ku heshiiyey in la badiyo dib u dejinta qaxootiga
Sweden oo ku yaboohdey dhaqaale dib u dejin loogu sameynayo qaxooiga aduunka
Publicerat onsdag 21 september 2016 kl 09.54
Shirweyne beesha caalamka ku yeelatay xarunta Qaramada Midoobey ee New York ayaa lagu heshiiyey in la labo jibaaro tirada qaxootiga ah ee dib u dejinta loo sameeyo.
DowladdaSweden ayaa ballanqaadey in ay ku taageerto dib u dejinta qaxootiga 150 milyan oo karoon, sida uu sheegay ra’iisalwqasaaraha Sweden Stefan Löfven oo asaga ka qayb galayey kulanweyne waddamada caalamka dhawaan ugu soo dhamaadey magaalada New York.
– Sweden lacag gaaraysa 175 ayey ku shubeysaa qasnad oo maareeyo bankiga aduunka, lacagtasna waxyaabaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah biyaha, bullaacaddaha, tamarta, iskuulada, caafimaadka, cuntaada iyo weliba nabadgelinta. Waddanka Libanon tusaale waxaa lsa iinayaa deymo waxtar leh, ayuu yeri Löfven wasiirka koobad ee Sweden.
Sannadkii hore waddamada Yurub waxaa soo gaaray qaxooti faro abdan taas oo keentay in xaaladda Yurub ay qas siyaasadeed gasho, Yurub waxay bareega u qabatay qaxootigii faraha badnaa ee ku soo qulqulayey. Kulanweynaha Qaramada Midoobey ee dhawan ka dhacay Magaalada New York waxaa looga xaajoonayey sida laga yeelayo cakiran ee qaxooti ee maanta caalamka wajahayo iyo weliba arrimaha socdaalka.
Xukumadda Sweden ayaa shalay shaacisay in ay kor u qaadeyso tirada qaxootiga ah ee ay Sweden soo qaado oo dib u dejin u sameyso. Hindisaha dowladda ayaa ah in kor looga qaado tirada ay Sweden ka soo qaadato xeriyaha qaxootiga oo maanta ah 1 900 oo ruux sannadkii lagana dhigo tiradas sannadka soo socda 3 400, halka sannadka ku sii xiga ee 2018 ay dowladda ku hindiseyso in tiradas laga dhigo 5 000.
Yaasiin Maxamed:"Waxaan rajeeynaya in qarabadeeyda lii keeno"
Sweden oo kor u qaadeysa qaxootiga ay dib u dejiso